Dowladda Malaysia iyo Dhaqdhaqaaqa XAMAAS oo ka hadlay Nin Falastiini ah oo lagu dilay caasimadda dalkaasi – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Boliska dalkaasi ayaa xaqiijiyey inay 2 nin oo hubeysan toogteen Faadil Maxamed Al-batash oo ahaa Aqoonyahan Jamaacadeed oo u dhashay Falastiin, xilli uu ku sii jeeday Masjid ku yaalla Degmadda Gombak ee duleedka Kuala Lampur.
Faadil Maxamed Al-batash oo 35-jir ah ayaa la sheegay inay toogteen Rag xubno ka ah Hay’adaha Sirdoonka ee shisheeyaha, sida uu sheegay Ku=xigeenka Ra’isul-wasaaraha Malaysia, Axmed Zaahid Zamidi.
Isagoo la hadlayey Wakaalladda Wararka u faafiya Malaysia ee BERNAMA waxa uu tilmamaay inuu rumeysan yahay inay Eedeysanayaasha dilka geystay ay u muuqaal ekaayeen dadka Reer Europe, kuwaasi oo xiriir la lahaa Hay’ad Sirdoon oo shisheeye ah.
Taliyaha Boliska dalkaasi, DATUK SEERI MANSOOR LAZIIM waxa uu isagana sheegay in 2-da nin ee dilka geystay ay muddo 20-daqiiqo ku sugayeen Marxuumka meel ka soo horjeeda Dhismooyin la deggan yahay EE Deegaanka Setapak, ka hor intaysan ka tooganin Madaxa iyo Saabley.Taliyaha waxa uu intaasi ku daray in ugu yaraan 10 xabbadood lala dhacay Marxuumka, oo isla goobtii ku geeriyooday.
Danjiraha Maamulka Falastiin u jooga dalka Malaysia, ANWAR ALAQA o ola hadlay Wargeyska
The New Straits Times ayaa sheegay inuu Marxuumku ahaa Iimaamka 2-aad ee Masjidka lagu ag dilay.
Waxa uu intaasi ku daray inuu Faadil Maxamed Al-batash ku noolaa dalka Malaysia muddo 10-sanno, isla markaana uu Barre ka ahaa mid ka mid ah Jaamacadaha ku yaalla dalkaasi.
Marxum Faadil Maxamed Al-batash ayaa la dilay xilli uu Salaadda Subax ku soo tukan lahaa Masjidka.
Marxuumka ayaa la filayey inuu shalay u dhoofo dalka Turkiga, oo uu kaga qeyb geli lahaa Shirweyne.
Marxumka waxa uu ifka kaga tegay 3-carruur iyo hooyadood.
Dhinaca kale, Aabaha dhalay Marxuumka oo la hadlay Telefishinka ALZEERA waxa uu ku eedeeyey dilka Wiilkiiisa inay ka dambeeyeen Hay’adda Sirdoonka Yuhuuda ee MOSSAD.
Waxa uu ugu baaqay Dowladda Malaysia inay qadaan Baaritaan sida ugu dhaqsaha badan, si loo soo qabto Dembiilayasha dilay Wiilkiisa, Marxuum Faadil Maxamed Al-batash.
Afhayeenka Dhaqdhaqaaqa Islaamiga ee XAMAAS, Hasiim Qaasim waxa uu xaqiijiyey inuu Marxuumka xubin ka ahaa Dhaqdhaqaaqa XAMAAS
Qoraal ay XAMAAS soo dhigeen barta ay ku leeyihiin TWITTER-ka waxay ku sheegeen inuu Marxuum Faadil Maxamed Al-batash ahaa Aqoonyahan da’ yar oo ka soo jeeda Deegaanka Jabaliyah ee Waqooyiga Marinka Qasa.
Waxay kaloo sheegeen inuu ahaa Shahiid taageero badan u fidiyey Qeybta Tamarta ee Ururka XAMAAS.
Hay’adda Sirdoonka MOSSAD ee Yuhuudda ayaa lagu tuhunan yahay inay ka dambeeyeen dilak Marxuumkaas.
Bishii December ee sannadk 2016-kii, Khabiir Falastiini oo lagu magacaabo Maxamed Al-zawaari kuna takhasusay samaynta Diyaaradaha aan duulliyaha lahayn ee DRONES-ka ayaa lagu dilay dalka Tunisia.
Ururka XAMAAS waxay ku eedeeyeen Sirdoonka Yuhuudda inay ka dambeeyeen dilkaasi.
Sawirro:-Muwaadin Somali-Canadian muddo 11-sanno ku xirnaa Ethiopia oo dib ugu laabtay Kanada